ဒိုင္းမြန္း ၃ ကို ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါျပီ — Steemit
ဒိုင္းမြန္း ၃ ကို ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါျပီ
mmunited (60) in game • 18 days ago
ဒီတစ္ခါ ဒိုင္းမြန္း ၃ ကိုေရာက္ဖို့ကေတာ့ သိပ္မလြယ္ကူလွပါဘူး။ လယ္ဗယ္ ၈ summoner ေတြေတာင္မွ ဒိုင္းမြန္း ၃ မွာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ ဖလား ၃၁၀၀ မေက်ာ္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လဲ ဆက္မေဆာ့ရဲ တာနဲ့ ရပ္ထားလိုက္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္အဆင့္က ၂၁ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီစစခ်င္းမို့လို့ ဒီေလာက္တက္နိုင္တာပါ။ ေနာက္ရက္ေတြဆို ျပန္က်ေတာ့မွာပါ။ ဒိုင္းမြန္း ၃ မွာကေတာ့ လယ္ဗယ္ ၈ ေတြမ်ားပါတယ္။ သူတို့ကို ယွဉ္ခ်ဖို့က မလြယ္လွပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လဲ ရသေလာက္ ျပန္တင္ထားတာပါ။ ဒါမွ quest လုပ္ရင္ ကဒ္ ၁၅ ခုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပိုစ့္ကို ၂၈ ရက္ေန့က ေရးခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္ ပိုစ့္တင္တဲ့ အခိ်န္မွာေတာ့ ထိပ္ပိုင္းနဲ့ အဆင့္ေတြ အေတာ္ကြာေနျပီ လို့ထင္ပါတယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒိုင္းမြန္း ၃ မွာ ဆက္ေနနိုင္ဖို့ ၾကိုးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရာသီကုန္ခါနီးရင္ေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန္းကလိုပဲ မာစတာ ၂ အထိ တက္နိုင္မယ္လို့ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။
ကဒ္ေတြ ေရာင္းတဲ့ အတြက္ ပိုက္ဆံေတြကေတာ့ ရပါတယ္။ ကိုယ္ကလဲ အကုန္လံုးေရာင္းခ်င္ေနတာပါ။ ေဈးေလွ်ာ့ေပးရင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းထြက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ ကဒ္လဲ ေရာင္းထြက္သြားေရာ ေဈးကြက္ထဲမွာ ကိုယ့္ကဒ္က ေဈးအေပါဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒိထက္ေဈးပိုတင္ထားလိုက္ရင္လဲ ေရာင္းရမွာပဲ ဆိုတဲ့ အေတြးက ဝင္ဝင္လာတယ္။ အဲ့ဒိေတာ့ မေရာင္းရရင္လဲ ေနပါေစ။ ေဈးေတာ့ ေလွ်ာ့မေပးနိုင္ဘူးလို့ ေတြးမိျပန္ေရာ။
ဒီတစ်ခါ ဒိုင်းမွန်း ၃ ကိုရောက်ဖို့ကတော့ သိပ်မလွယ်ကူလှပါဘူး။ လယ်ဗယ် ၈ summoner တွေတောင်မှ ဒိုင်းမွန်း ၃ မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဘယ်သူမှ ဖလား ၃၁၀၀ မကျော်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ဆက်မဆော့ရဲ တာနဲ့ ရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဆင့်က ၂၁ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီစစချင်းမို့လို့ ဒီလောက်တက်နိုင်တာပါ။ နောက်ရက်တွေဆို ပြန်ကျတော့မှာပါ။ ဒိုင်းမွန်း ၃ မှာကတော့ လယ်ဗယ် ၈ တွေများပါတယ်။ သူတို့ကို ယှဉ်ချဖို့က မလွယ်လှပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ရသလောက် ပြန်တင်ထားတာပါ။ ဒါမှ quest လုပ်ရင် ကဒ် ၁၅ ခုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်ကို ၂၈ ရက်နေ့က ရေးခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ် ပိုစ့်တင်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ထိပ်ပိုင်းနဲ့ အဆင့်တွေ အတော်ကွာနေပြီ လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒိုင်းမွန်း ၃ မှာ ဆက်နေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီကုန်ခါနီးရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန်းကလိုပဲ မာစတာ ၂ အထိ တက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
ကဒ်တွေ ရောင်းတဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံတွေကတော့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ကလဲ အကုန်လုံးရောင်းချင်နေတာပါ။ ဈေးလျှော့ပေးရင်တော့ ချက်ချင်းထွက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ကဒ်လဲ ရောင်းထွက်သွားရော ဈေးကွက်ထဲမှာ ကိုယ့်ကဒ်က ဈေးအပေါဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ ဒိထက်ဈေးပိုတင်ထားလိုက်ရင်လဲ ရောင်းရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးက ဝင်ဝင်လာတယ်။ အဲ့ဒိတော့ မရောင်းရရင်လဲ နေပါစေ။ ဈေးတော့ လျှော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ တွေးမိပြန်ရော။
Posted from my blog with SteemPress : https://myanmarpress.xopus.io/?p=695
game myanmar steem steemmonsters steempress
18 days ago by mmunited (60)
You just gota5.89% upvote from SteemPlus!
Your UA account score is currently 1.571 which ranks you at #35205 across all Steem accounts.
Your rank has improved 267 places in the last three days (old rank 35472).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 194 contributions, your post is ranked at #140.